Dhimashada Shaqaalaha Turkiga ee Qarixii Al-Shabaab oo korortay | KEYDMEDIA ONLINE
Dhimashada Shaqaalaha Turkiga ee Qarixii Al-Shabaab oo korortay
Labada Muwaadin ee Turkiga ee ku dhintay qaraxa ayaa lagu kala magacaabi jiray Erdinç Genç iyo Selami Aydoğdu.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa kordhay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee qaraxii shalay ka dhacay degaanka Lafoole, oo 12-KM galbeed uga beegan magaaladda Muqdisho.
Tirada dhimashadda inta la xaqiijiyay waxay gaartey 5, oo ay kamid yihiin labo Muwaadin oo Turki ah, oo magacyadooda lagu kala sheegay Erdinç Genç iyo Selami Aydoğdu, iyadoo ay dhaawacmeen 14 kale.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxa oo uu fuliyay qof natii-hure ah oo weeraray Shaqaalaha Turkiga xili ay ku guda jireen dhismaha jidka Afgooye iyo Muqdisho isku xira, oo hadda heer -gaba-gabo maraya.
Madaxweyne ku xigeenka Turkiga Fuat Oktay ayaa sheegay in ujeedka Turkiga u joogo Soomaaliya ay tahay inuu caawiyo walaalahooda Soomaaliyeed, kana qeyb qaato dib u dhiska wadanka ay dagaalladu burburiyeen.
Tan iyo 2011, Turkiga ayaa dalka ku bixiyay in ka badan $400 million oo maalgelin iyo mashaariic isagu jira, wuxuuna ka dhistay Muqdisho Safaarad wayn oo xeebta Liido ku taalla.
Laakiin, amni la'aanta ayaa xadiday Mashaariicdii badnayd ee Turkiga ka fulinayay dalka, oo hadda kusoo koobmay Muqdisho, oo xitaa lagu beegsanayo. Dec. 2019, labo Turki ah ayaa kamid ahaa ugu yaraan 90 qof oo lagu dilay qarax ka dhacay Ex-control Afgooye.
Sababta Al-Shabaab u beegsanayso Turkida ayaa ah inay tababaraan Ciidanka dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira, kuwaasoo kasoo baxa Xerada Camp TURKSOM oo la furay 2017, taasoo ku taalla degaanka Jazeera.